छविराजलाई आफ्नै आमाले चिनिनन्, किन होला ? « Ramailo छ
छविराजलाई आफ्नै आमाले चिनिनन्, किन होला ?
निर्माता छविराज ओझा सेलिव्रेटी निर्मातामा गनिन्छन् । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा बाघ निर्माताको परिचय बनाएका छविराज सर्वसाधरण जनताले पनि चिन्ने निर्माता हुन् । अझ उन्लाई रेखा थापाको श्रीमानका रुपमा एक समय बढी सर्वसाधरणले चिन्थे भने अहिले शिल्पा पोखरेलेको श्रीमानको रुपमा चिन्दछन् ।
सबैले चिन्ने छविराजलाई आफ्नै आमाले भने चिनिनछन् रे । चिन्ने सर्वसाधरण पनि कम भैरहेका छन् रे । एक फिल्मको विशेष शोमा छविराज भन्दैथिए, ‘अहिले त मलाई चिन्नै गाह्रो पर्छ । एक चोटी त आफ्नै आमाले पनि चिन्नु भएन ।’ वृद्ध उमेरकी आमाले किन चिनिन् होला त छविराजलाई ? के उनको आँखा कमजोर भएको थियो ?
त्यसो होइन, छविले भनिहाले । उसो भए किन चिनिन् त आमाले आफ्नै छोरालाई ? ‘यो पालेको दाह्रीले गर्दा आमाले पनि चिन्नु भएन’, छविले खुलाए । हुन पनि हो छविको बाक्लो फुलेको दाह्रीले उन्लाई सजिलै चिन्न मुस्किल पर्छ । अब के गर्नुहुन्छ त ? यही दाह्रीमा सबैलाई चिन्ने गराउँछु, ‘मंगलम’ रिलिजको तयारीमा लागेका छविले भने ।